Session: Open Source လုံခြုံတဲ့စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ် Linux မှ
အကြောင်းမျိုးစုံနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲသတင်းကြောင့် WhatsApp ရဲ့သိသိသာသာသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအားနည်းချက်များတစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအကြားကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအပြုဆုံး messaging application များထဲမှတစ်ခုသည်များစွာသောအပြိုင်သို့မဟုတ်လုံးဝသို့ရွေ့လျားခဲ့ကြပြီးအခြားအကြံပြုထားသော application များကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြသည်။ ကွေးနနျးစာ y signal.
En FromLinuxငါတို့ကများသောအားဖြင့်စကားမပြောကြဘူး WhatsApp ကိုသောကြောင့် ၎င်းသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ရည်ညွှန်းရန်ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီလုပ်ပါ အားနည်းချက်များ သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောဖြေရှင်းမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ယခုငါတို့ပြောမည် sessionတစ် ဦး အဖြစ်ရာထူးတိုးသော ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်လုံခြုံစာတိုပေးပို့ရေး app ကို.
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအသုံးပြု။ ရပ်တန့်ပါပြီ WhatsApp ကို ငါ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးငါသိပ်မသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီကြားကဒေတာတွေနဲ့ disk space တော်တော်များများဟာအခြားဆိုးကျိုးတွေကြားမှာ။ ငါသုံးနှစ်အဘို့ပြင်းထန်စွာသုံးပြီးပါပြီ ကွေးနနျးစာ ယခုလုံးဝကြိုက်တယ် ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း နှင့် / သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းနှင့် desktop messaging application.
1 WhatsApp အသုံးပြုမှုကိုလျော့ချသို့မဟုတ်ရှောင်ရှားပါ
2.2 သော့ချက် features တွေ
ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းပြချက်တွေကျော်လွန်ပြီး အစစ်အမှန်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှထင်ဟပ်သောအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နှင့်ပတ်သက် WhatsApp ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းများဖြစ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ -
"ဥရောပကော်မရှင် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်မှုများ၏လုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်အဆုံးမှအဆုံးသို့ encrypted messaging application တစ်ခုစတင်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်ညွှန်ကြားချက်သည်စာတိုပေးပို့မှုဘုတ်အဖွဲ့တွင်ပေါ်ထွက်လာပြီး“ အများပြည်သူသုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအတွက်အချက်ပြကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်စနစ်နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နည်းပညာများကြောင့် privacy ကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကဒီ app ကိုနှစ်သက်သည်။". နိုင်ငံရေးမီဒီယာ - 23/02/2020
"ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွင် WhatsApp ကိုမသုံးရန်သူတို့၏အရာရှိများကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်သည်ဆော်ဒီသရဖူ (မင်းသား) နှင့် WhatsApp ကို အသုံးပြု၍ အခြားကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိ၊ မရှိမေးမြန်းသည့်အခါကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Farhan Haq ကကြာသပတေးနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ WhatsApp ကိုအသုံးမပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းသည်လုံခြုံသောယန္တရားတစ်ခုအဖြစ်မထောက်ပံ့ပါ". ရိုက်တာအလယ်အလတ် - 23/01/2020
အကြောင်းရင်းများစွာအတွက်သတင်းအချက်အလက်၊ သင်အကြောင်းပြချက်များသို့မဟုတ်သတင်းများသည်ယခုအသစ်ဖြစ်သည် စာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာ အများပြည်သူမှတဆင့်သူ၏လမ်းစေသည်, အထူးသဖြင့်ကိုနှစ်သက် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖုန်းခေါ်သည် session.
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ developer များအရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အထူးသ၎င်း၏ "White Paper" (အဖြူစာတမ်းများ):
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖန်တီးထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည် Loki ကုမ္ပဏီ၎င်း၏သုံးစွဲသူများ၏လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုအဓိကထားသောဆော့ဝဲလ်ထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ရန်ဖန်တီးထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု။
၎င်းသည် open source တည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အထိခိုက်မခံသော metadata များစုဆောင်းခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည့်အဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကိုအသုံးပြုသည်။
၁၀ ယောက်အထိရှိသောအုပ်စုများသို့မဟုတ်အသင်း ၀ င်အကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည် metadata များကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၏ metadata များကိုမသိမ်းဆည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လက်ရှိစောင့်ကြည့်မှုပုံစံများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါပိုမိုမြင့်မားသော privacy နှင့်လွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်ကိုပေးရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်းတွင်အသုံးပြုသူဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာအတွက် session ID ကိုအသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်လုံးဝအမည်မသိအကောင့်များဖန်တီးခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် session ID တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်မရှိပါ။
ငါတို့အကြောင်း GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ, session ပုံစံတစ်ခုတပ်ဆင်ဖိုင်ကိုပေးပါသည် AppImage ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 125 ကို MBယခုလက်ရှိပါရှိသည် တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 1.0.2။ အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်, installation ကိုစူပါလွယ်ကူပါလိမ့်မည်နှင့်ငါတို့လက်ရှိဖြန့်ဝေအများအပြားနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘို့ အန်းဒရွိုက်, session - ပုဂ္ဂလိက Messenger ကို, ဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 10.0.3အရွယ်အစားနှင့်အတူ 20 ကို MB နှင့်တစ်ဗားရှင်းလိုအပ်သည် အန်းဒရွိုက် 5.0 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Session»အလွန်အရေးကြီးသောလက္ခဏာများရှိပြီးအခြားလူကြိုက်များသည့်စာတိုပေးပို့ရေး application များနှင့်ဆင်တူသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်လုံခြုံသည့်စာတိုပေးပို့ရေး application သည်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Session: Open Source လုံခြုံတဲ့စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်
virtual အစီရင်ခံစာ ဟုသူကပြောသည်
စမတ်ဖုန်းများကိုတီထွင်ခဲ့ချိန် မှစ၍ ခြေရာခံရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယခုအခါ Facebook ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု (WhatsApp, Messenger, IG စသည်) သည်အလွန်ကြီးမားသောအချက်အလက်များကိုထုတ်လုပ်နေကြသည်။
မင်္ဂလာပါ, VirtualReport ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါလုံးဝသဘောတူတယ်
ငါ software ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာတွေ့ကတည်းက ... သတင်းနှင့်အတူမွမ်းမံရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ရုပ်သံလိုင်းပိုင်ချင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါသိချင်တာတစ်ခုကတော့ဒီ application ကို GNU / Linux မှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီနောက်သူတို့ဟာ Electron (software framework) မှာရှိပြီးကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာစတင်ဖို့အချိန်ယူရတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်လက်တွေ့မကျတဲ့ Signal လိုဆဲလ်ဖုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရတာကောင်းပါတယ်။
ကိုယ့်စပ်စုခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါ heh heh ကြိုးစားရန်သွားမယ်။ လေးစားပါတယ်
Babel နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ၎င်းကိုသိရန်သေချာသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အီလက်ထရွန်ဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း (သို့) သိသာစွာပြုလုပ်ထားခြင်းရှိမရှိ၎င်းကို Whitepaper တွင်သော်လည်းကောင်း၊ FAQ အပိုင်း၌သော်လည်းကောင်းမပြပါ။ အခြားတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ငါဆဲလ်ဖုန်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့် multi-device ကိုထပ်တူပြုခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ် မူတည်၍ လုံးဝအမည်မသိသောအကောင့်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်မည်သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။
Android မှာတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတာကိုမြင်ဖူးလား။ လုံးဝထွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
Protonmail သည်ကောင်းမွန်သော messaging app တစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်
Jose Marin သို့ပြန်သွားပါ
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Azure Sphere သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်